Xulka Belgium oo qorsheynaya inuu kubadda joojiyo daqiiqadda 10-aad ee ciyaarta ay caawa la leeyihiin Denmark si loo taageero Eriksen… (Maxaa lagu doortay daqiiqaddaas?) – Gool FM
Xulka Belgium oo qorsheynaya inuu kubadda joojiyo daqiiqadda 10-aad ee ciyaarta ay caawa la leeyihiin Denmark si loo taageero Eriksen… (Maxaa lagu doortay daqiiqaddaas?)
(Copenhagen) 17 Juun 2021. Xiddigaha xulka qaranka Belgium ayaa qorsheynaya inay kubadda u saaraan bannaanka daqiiqadda 10-aad ee ciyaarta si taageero loogu muujiyo xiddiga xulka Denmark ee Christian Eriksen kaasoo wadnaha laga qabtay intii ay socotay ciyaartii xulkiisa ay guuldarrada kala kulmeen Finland.
Eriksen ayaa haatan ku jira isbitaalka isagoo kasoo kabanaya xanuunkii wadnaha kaasoo kalifay inuu xiddigan istaagga ka dhaco sidoo kalena uu miyir daboolnaado daqiiqado, waxaana caawa xulka Belgium uu qayb ka qaadan doonaa taageerada xiddiga khadka dhexe ka ciyaara kulanka ay xulkiisa la balansan yihiin.
Taageerayaasha ayaa qorsheynaya inay u sacabbo tumaan xiddigan daqiiqadda 10-aad ee ciyaarta.
“Kubadda ayaan joojineynaa si aan uga qayb qaadanno sacab” ayuu yiri Romelu Lukaku oo weerarka uga ciyaara xulka Belgium sidoo kalena ay Inter Milan u wada ciyaaraan Eriksen.
Lukaku ayaa intaas ku daray in dhow xiddig oo ka tirsan xulka Belgium ay soo wada ciyaareen Eriksen, balse kulanka caawa ay u socdaan inay guuleystaan si ay u xaqiijiyaan booskooda wareegga bug-baxda ee tartanka Euro 2020.
Sababta loo doortay daqiiqadda 10-aad ee ciyaarta ayaa ah inuu xiddigan xulka Denmark u xirto maaliyadda No. 10 (Lambarka 10-aad).
Xulalka Denmark iyo Belgium ayaa caawa ku balansan magaalada Copenhagen ee dalka Denmark kulan ka tirsan guruubka B ee tartanka qarammada qaaradda Yurub.